Kalfadhiga 12-aad ee golaha deegaanka Garoowe oo la soo gabagbeeyay – Radio Daljir
Kalfadhiga 12-aad ee golaha deegaanka Garoowe oo la soo gabagbeeyay
Garowe, Mar 13 -Waxaa maanta lasoo gabagabeeyay kalfadhigii 12-aad ee golaha deegaanka ee degmada Garoowe,kaasi oo socday muddo 13-cisho ah, soona bilawday 1-dii bishan March.
Duqa magaalada Garoowe Cabdicasiis Nuur Cilmi oo shirgudoomiyanayay kalfadhiga ayaa gabagabadii ka hadlay waxyaabihii ay golaha deegaanka ee degmada Garoowe uga soo baxay mudadii uu socday kal-fadhiga.
Waxaa uu sheegay golaha deegaanka ee degmada Garoowe inay ka arrinsadeen arimaha amaanka ee degmada Garoowe,lana soo saaray wacyi gelino dhinaca amniga oo bulshada loogu codsanayo inay ka shaqeeyaan sarre u qaadidda amaanka caasimadda.
Waxaa uu sheegay qodobadii kasoo baxay kal-fadhiga inay ugu muhiimsanayd in wadooyinka magaalada loo sameeyo leerar waawayn si amaanka caasimadda loo adkeeyo,islamarkaana laga hortago kooxaha dhalinyarada oo xaafadaha qaarkood ku baaranaya dadwayanaha.
Gudoomiyaha ayaa waxaa sidoo kale sheegay in go’aamo laga soo saaray in shidaalka aan lagu dhex iibin gudaha magaalada Garoowe, si looga fogaado qatarada dhinaca dabka ee xiliyada qaarkood ka kaca gudaha magaalada.
Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdi Xirsi Cali “Qarjab” oo soo xiray kal-fadhiga 12-aad ee golaha deegaanka ee degmada Garoowe ayaa waxaa uu sheegay in loo baahanyahay dadwayanaha magaalada Garoowe inay ka qayqaataan horumarinta magaalada, islamarkaana loo baahanyahay dowladda hoose ee magaalada Garoowe inay wax ka qabato dhibaatooyinka mararka qaar ka imaanaya dhulalka banaan.